DNF သည် Ensemble Designs BrightEye NXT Router အတွက် IP-based Control ကိုပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DNF Ensemble Designs '' BrightEye NXT Router အတွက် IP-အခြေပြုထိန်းချုပ်ရေးကမ်းလှမ်း
DNF Ensemble Designs '' BrightEye NXT Router အတွက် IP-အခြေပြုထိန်းချုပ်ရေးကမ်းလှမ်း
အိုင်ပီထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy ကိုဖြည့် Ensemble ရဲ့ Compact Router နေရာမှာလည်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုများကိုစီမံကွပ်ကဲရန်
Northridge, ကာလီဖိုးနီးယား: DNF ထိန်းချုပ်မှုများ - ထိုဆုရနှင့်သိရှိသည့်ခေါင်းဆောင်
လူ့-စက်-ရန်နှင့်စက်-to-စက် interfaces အတွက် - နှင့်အတူ IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy interfaces တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ Ensemble Designs'' Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း BrightEye NXT router များ။ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ, သူတို့ကအထူးသဖြင့်, အာကာသတစ်ဦးပရီမီယံမှာဘယ်မှာအခြေအနေများ, ဥပမာအောက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်နှင့် signal ကိုလမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲ-ထုပ်ပျံလျက်, ENG ကုန်တင်ကားသို့မဟုတ်ရဟတ်ယာဉ်များကောင်းစွာ-ကိုက်ညီပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ BrightEye NXT နှင့် IP ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy ထုတ်ကုန်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါနှင့်ရေကြောင်းဖြစ်ကြသည်။
Ensemble Designs၏ '' မိသားစု BrightEye NXT Compact router များ ဗွီဒီယိုနဲ့အသံသတင်းရပ်ကွက်၏သန့်ရှင်းသောတိတ်ဆိတ် switching ပေးပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးကို real-time ဖော်ပြပေးသောသီးသန့်ရှေ့ panel ကို LCD ကို, Router ကသတင်းရပ်ကွက်များကအပြည့်အဝရွေ့လျားမှုဗီဒီယို, ပေါင်းစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်တစ်ခုအလိုလိုသိကို web interface ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
DNF ရဲ့ ပတျသကျ. အလှနျသေးနု အိုင်ပီထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy - အတော်ကြာ configurations- အတွက်ရရှိနိုင်အလွယ်တကူတစ်ခလုတ်ကိုစာနယ်ဇင်းကနေမဆို Ethernet, RS422 သို့မဟုတ် RS232-enabled device ကိုထိန်းချုပ် GPI ခလုတ်, ပိတ်သိမ်းသို့မဟုတ် web page ကိုခလုတ်ထပ်ဆင့်လွှင်။ ဒါဟာအလွယ်တကူရိုးရှင်းသော Drop-down menus တွေနဲ့ပရိုဂရမ်မာ-အခမဲ့, Browser ကို-based setup ကို အသုံးပြု. နှင့်ဖြည့်ပါ-In စာသားကိုသေတ္တာများစီစဉ်ပေးသည်။
ဒါဝိဒ်သည် Wood က, Ensemble ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ, commented: "ဒီ DNF IP ကို ​​Buddy တယောက်အသုံးပြုသူများအော်ပရေတာရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာဖွင့်လက်ျာ function ကိုထားရန်ထိန်းချုပ်မှု customize ခွင့်ပြု, အ NXT ထိန်းချုပ်မှုစနစ်လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်။ ခလုတ်၏ dynamic ခြေထောက်ဇာတ်သိမ်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအခြေအနေများအတွက်အော်ပရေတာယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပေးတော်မူ၏။ "
"ကျနော်တို့ Ensemble ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့်အတူဤဖြေရှင်းချက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အလွန်ကျေနပ်နေ" ဒန် Fogel, DNF ရဲ့အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိကပြောသည်။ "အိုင်ပီထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy ဇာတ်လမ်းဖမ်းယူအပေါ်ထက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်မိမိတို့၏အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်မှအော်ပရေတာဖွင့်, အ BrightEye router ကို၏ access ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းစွာ။ "
အကြောင်းအရာ DNF ထိန်းချုပ်မှုများ
DNF ထိန်းချုပ်မှုများ ထက်ပိုမို 28 နှစ်ပေါင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစက်ကိုထိန်းချုပ် interfaces, တီထွင်ဆန်းသစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်း လူ့-to-စက် နှင့် စက်-to-စက် ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းနည်းများ
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ device ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစတူဒီယိုနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လွှင့်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, teleproduction နှင့်အလားတူအဆောက်အဦ။
အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး DNFControls.com
BrightEye NXT Compact router များ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် DNF ထိန်းချုပ်မှုများ အိုင်ပီထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: Paywizard နှင့် Massive Interactive လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အဓိကဖောက်သည်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်ပစ်မှတ်ထားထားသော front-end UX ကိုမောင်းနှင်ရန်ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: တိုးတက်လာသောအကြောင်းအရာဖြည့်ပံ့ပိုးပလက်ဖောင်းများ၏နှလုံးမှာဥရောပကော်မရှင်နေရာများ Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက်နှင့် Vantage Transcoding